काठमाडौंमा भर्खरै ३६ जना प्रहरीमा कोरोना पुष्टी र थप एकको मृ’त्यु भएपछी अचानक एस्तो सुचना जारी ! – Eshankharapur
सुन्दरी गायिका लिएर आधा रातिमा पुण्य गौतम गौशाला पुगे- भिडियो हेर्नुहोस
कोरोना संक्र`मित बढे पछि फेरि सिल गर्न थालियो !
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/काठमाडौंमा भर्खरै ३६ जना प्रहरीमा कोरोना पुष्टी र थप एकको मृ’त्यु भएपछी अचानक एस्तो सुचना जारी !
काठमाडौंमा भर्खरै ३६ जना प्रहरीमा कोरोना पुष्टी र थप एकको मृ’त्यु भएपछी अचानक एस्तो सुचना जारी !
सशस्त्र प्रहरी बल(एपीएफ)का काठमाडौं र भक्तपुरमा कार्यरत ३६ जना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । डिआइजी अर्यालका अनुसार भक्तपुरको दुवाकोटस्थित गुहेश्वरी गणमा २० जना र निलबाराही गण कीर्तिपुरमा कार्यरत १६ जना प्रहरीमा काेराेना देखिएको हो ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालले काेराेना संक्रमण भेटिएको पुष्टि गरे ।गुहेश्वरी गणमा कार्यरत संक्रमित प्रहरी सिमा क्षेत्रमा खटिएर गण फर्किएका थिए । सिमा सिल गर्ने क्रममा काठमाडौंबाट उनीहरु तराईका विभिन्न जिल्लामा गएका थिए ।
त्यस्तै निलबाराही गणमा कार्यरत पनि उपत्यका बाहिरबाट भर्खरैमात्र फर्किएका हुन् । संक्रमितहरुलाई आइसोलेसेनमा पठाउने तयारी गरिएकाे प्रवक्ता अर्यालले बताए । त्यस्तैगरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट काठमाडौंमा एक जनाको मृत्यु भएको छ।
कोरोना संक्रमणबाट सशस्त्र प्रहरीको बलुम्बीस्थित एपीएफ अस्पतालमा उपचाररत ७७ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। सप्तरीको राजविराजबाट काठमाडौं आएपछि ती वृद्धले कोरोना परीक्षणका लागि वीर अस्पतालको प्रयोगशालामा स्वाब दिएका थिए। रिपोर्ट कोरोना पोजेटिभ आएपछि सुरुमा उनी ग्रिनसिटी अस्पताल भर्ना भएका थिए।
मंगलबार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा एकैदिनमा धेरै एक हजार १६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । ७ जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै कारोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरुको संख्या ११६ पुगेको छ । संक्रिय संक्रमित १० हजार ५६३ छन् । कोरोना विशेष अस्पतालहरुमा बेडको अभाव हुन थालेको छ भने कतिपय संक्रमितले आईसीयू र भेन्टिलेटर नपाएर मृत्युवरण गर्नु परेको छ । असार अन्तिम सातादेखि साउन दोस्रो सातासम्म महामारी नियन्त्रण गर्‍यौं भनेर आत्मरतीमा रमाउँदा यो अवस्था आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
दुई सातासम्म परीक्षण घटाउनु र लकडाउन हट्यो भन्ने सन्देश दिनु गलत भएको भएको उनको कथन छ । ‘असार अन्तिमसम्म हामी सही ट्रयाकमा थियौं, साउन महिनामा लापरवाही गर्नु हाम्रो गल्ती भयो’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘हाम्रै लापरवाहीका कारण संक्रमणले सोचेभन्दा फरक बाटो लियो ।’
काठमाडौंको यी तीन क्षेत्रमा आजदेखि १४ दिन लकडाउन
कोरोना उपचारमा लाग्ने एन्टि भाइरल रेमडि`सिभिर औषधी बाङ्लादेश बाट ल्याइँदै !!!
Breaking News: नेपालमा एकैदिन थपिए १४ कोरोना संक्र`मित यससँगै संक्र`मितको संख्या ३० पुगेको छ
काठमाडाैँकाे पाटन अस्पतालमा २ जना कोरोना संक्रमितको मृ त्यु